Imbali Yembali yeeVisigoths
I-Visigoth yayingamaqela aseJalimane acingelwa ukuba ahlukane namanye amaGoth ngasekuqaleni kwekhulu lesine, xa befudukela eDacia (ngoku e-Romania) baya kwiBukhosi baseRoma . Ekuhambeni kwexesha bafudukela kwintshonalanga, baya e-Italiya, baya eSpeyin-apho abaninzi bahlala khona - babuya empumalanga babuya eGaul (ngoku iFransi). Ubukumkani baseSpain behlala kude kube ngekhulu lesibhozo xa behlulwa ngabahlaseli baseSilamsi.
Iimpawu zokuqala zabafudumi baseMpuma naseJamani
Imvelaphi yamaVisigoth yayinayo iTheruingi, iqela elinabantu abaninzi-amaSlav, amaJamani, amaSarmati kunye nabanye - phantsi kobunkokeli be-Gothic baseJamani. Baya kwiindawo ezivelele xa befuduka, kunye ne-Greuthungi, ukusuka eDacia, ngaphesheya kweDanube, ukuya kwiBukhosi baseRoma, mhlawumbi ngenxa yoxinzelelo lwaseHuns ehlasela ngasentshonalanga . Kusenokwenzeka ukuba babe malunga nama-200 000. I-Theruingi "yavunyelwa" ebukumkanini kwaye yahlaziywa ngenjongo yokubuyela enkonzweni yempi, kodwa yavukela ama-Roman strictures, ngenxa yobugovu nokuphathwa kakubi kwabalawuli baseRoma basekhaya, kwaye yaqala ukuphanga i- Balkan .
Ngo-378 CE badibana baza bawunqoba uMlawuli waseRoma uValens kwiMfazwe yase-Adrianople, bambulala. Ngo-382 uMlawuli woLandelayo, uTheodosius, wazama iindlela ezahlukeneyo, wazinzisa kwi-Balkans njengama-federate kunye nokuzikhwaza ngokukhusela umda.
UTheodosius wayesebenzisa iGoths kwimikhosi yakhe kwiphankaso kwenye indawo. Ngeli thuba baphendukela ebuKristwini beArian.
Ekupheleni kwekhulu lesine i-confederation ye-Theruingi ne-Greuthungi, kunye nabantu bazo izifundo, ezikhokelwa ngu-Alaric zaziwa ngokuba yi-Visigoths (nangona zingazijonga nje njengeGoths) kwaye zaqala ukufuduka kwakhona, kuqala ukuya eGrisi ize zize e-Italy, apho bahlasela khona ngezihlandlo ezininzi.
U-Alaric wadlala amacandelwana aseMbusweni, icebo elibandakanya ukuphanga, ukuze aqinisekise isihloko sakhe kunye nokutya rhoqo kunye nenkcitho kubantu bakhe (abangenawo umhlaba wabo). Ngo-410 bawahlamba iRoma. Bathetha ukuzama i-Afrika, kodwa u-Alaric wafa ngaphambi kokuba ahambe.
Umlandeli ka-Alaric, u-Ataulphus, waza wabakhokela entshonalanga, apho bahlala khona eSpeyin nxalenye yeGaul. Kungekudala emva kokuba babuzwa empumalanga ngumbuso wexesha elizayo uConstantius III, owamisa njengama-federates e-Aquitania eSecunda, ngoku eFransi. Ngeli thuba, u-Theodoric, osibona ngoku njengowokumkani wokuqala wokuqala, wawalawula de wa bulawa kwi-Battle of the Catalaunian Plains ngo-451.
Ngo-475, unyana ka-Theodoric nomzuli, u-Euric, wavakalisa iiVisigoth ezizimeleyo zaseRoma. Ngaphantsi kwakhe, iiViigigoth zadibanisa imithetho yazo, ngesiLatini, zazibona iindawo zabo zaseGallic ngokubanzi. Nangona kunjalo, amaVisigoth aphantsi koxinzelelo obukumkani waseFrank wakhula kunye no-507 u-Alau II, u-Alaric II, wahlulwa waza wabulawa kwi-Battle of Poitiers nguClovis. Ngenxa yoko, amaVisigoth alahlekelwa onke amazwe abo aseGallic ibhola elincinci elincinci elingu-Septimania.
Ubukumkani babo obuhleliyo belikhulu laseSpain, elinenkunzi enkulu eToledo. Ukubamba ndawonye i-Peninsula yase-Iberia ngaphantsi komnye urhulumente ophakathi ubizwa ngokuba yimpumelelo ephawulekayo enikezelwe yintlobo eyahlukeneyo yommandla. Oku kuncedwa nguguquko kwintandathu yesibini yeentsapho zobukumkani kunye noobhishophu okhokelayo kumaKatolika . Kwakukho imibutho eyahlukanayo nevukelayo, kuquka indawo yaseAzzantine yaseSpain, kodwa yahlulwa.
Ukutshatyalaliswa nokuphela koBukumkani
Ngenkulungwane yesibhozo yokuqala, iSpain yaxinzelelwa yimikhosi yama-Muslim e-Umayyad , eyawayisa amaVisigoths e-Battle of Guadalete kwaye emva kweminyaka elishumi yayithatha ininzi ye-peninsula yase-Iberia. Abanye babalekele kumazwe aseFrank, abanye bahlala behlala kwaye abanye bafumana ubukumkani baseNtshonalanga yaseAsturias, kodwa iiVisigoth njengoluhlanga lwaphela.
Ukuphela kobukumkani baseVisigothiki bekuye kwahlwayelwa ukuba babulawa, bawa phantsi ngokukhawuleza xa behlaselwa, kodwa le ngcamango sele iyanqatshwa kwaye iimbali-mlando zisasafuna impendulo kulolu suku.
U-Puyi, uKumkani wasekugqibela waseChina
Yintoni Ubomi Bakho Injongo?
Iminyaka engama-50 yamaCamaro
Iingxaki ngeeLanga zeFluorescent
Ileta yokuBhenela kweNgcaciso yokuPhumela kweZifundo zeNgcaciso
Iincwadi ze-Classic Zonke Ilungu le-LDS kufuneka lifunde
Uthando lweTaurus kunye neCapricorn
IBritish Raj eIndiya